Ukanzwisisa Jesu Unotovafarira Chete
"Kuti ndivazive ivo. Nesimba rakavamutsa kuvakafa. Ndigotambura pamwe navo. Ndichiurawavo nenzira yavakaurawa nayo ivo" (Vafiripi 3 ndima 10).
Pauro ndiye akanyora ndima yatavhura nayo. Anoti, "Kuti ndivazive ivo ...". Kana ukanzwisisa Jesu unotovafarira chete. Ndiko kusaka Pauro aishuva kuvaziva. Pangaita munhu asingafariri Jesu. Munhu uyu anenge asinganatsi kuvaziva. Vanhu ava vanofanira kunzwisisa Jesu. Hazvizogoni kuti vasavafarira. Saka unofanira kuwedzera kunzwisisa Jesu. Izvozvo zvinozoita kuti uwedzerevo kuvafarira. Hareruya!
Izvi ndizvo zvatinovona pana Pauro. Pauro akanga ari Mufarise. Boka rake ndiro riya raisafarira Jesu. Ndiro rakatungamirira pakutambudza vatsvene vekutanga. Pauro ndiye mumwe akanga ari kutambudza vatsvene ava. Hurumende yake yakatomupa mvumo yekutambudza vatsvene ava. Izvi ndizvo zvatinoziviswa neBhaibheri. Mabasa 8 ndima 3 inoti, "Sauro akatanga kutambudza sangano. Aipindira vatsvene mudzimba dzavo. Achivasunga. Aisunga varume nevakadzi. Achindovavharira".
Pauro haana kugumira ipapo. Akaramba achivhundusira vateveri vaIshe. Achivimbisa kuvauraya. Izvi ndizvo zvatinoziviswa naRuka. Tinozviverenga muna Mabasa 9 ndima 1. Asi pane chinhu chakazoitika. Chinhu ichi chakabva chashandura hupenyu hwake zvachose. Chakaitika achienda kuDhamasiko. Akasangana naIshe ari munzira kuendako. Mabasa 9 ndima 3 kusvika 6 inotizivisa zvakaitika. Inoti, "Akanga ari parwendo urwu. Ava kusvika Dhamasiko. Chiedza chikabva kudenga. Chikamupenyera. Chiedza ichi chakanga chichijeka zvikuru. Sauro akabva awira pasi. Akanzwa inzwi. Richiti, 'Sauro! Sauro! Unonditambudzireiko?' Iye akadavira. Akati, 'Ndimi aniko? Nhai Ishe?' Inzwi riya rakadavira. Rikati, 'Ndini Jesu. Ndini wacho wauri kutambudza. Uri kuzviwomesera. Nokuti uri kukava zvinhu zvinobaya'. Sauro akatanga kutya. Akati, 'Ishe! Chii chamunoda kuti ndiite? ...". Hareruya!
Pauro akabva atanga kuziva Ishe. Izvi zvakabva zvaita kuti atange kuvashandira. Akabva atanga kufamba nenyika. Achizivisa vanhu kuti Jesu vapenyu. Uye kuti variko pachokwadi. Pauro akanga ava kunzwisisa Jesu. Saka akanga ava kuvafarira zvikuru. Hapana aigona kudzimura rudo rwake urwu.
Ndiko kusaka akataura muna Vaefeso 3 ndima 19 achiti, "Irwo rudo irworwo rusingagoni kunzwisisiwa nepfungwa dzemunhu. Uye kuti zvinhu zviya. Zvinowanikwa muna Mwari. Zviwanikwevo mamuri. Zvakakwana". Izvi ndizvo zvawakarongerwa naMwari. Vanoda kuti mweya wako unzwisise Muponesi Jesu. Havadi kuti uvazive nepfungwa chete. Vanodazve kuti zviri muna Mwari zvose zvivevo mauri iwe. Rudo rwavo rupfachuke mauri . Zvichivonekwa kuti wava weropa ravo. Wava werudzi rwavo. Uye kuti simba ravo ndiro rawava kushandisa pakurarama kwako. Hareruya!
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Mweya wangu wava kunzwisisa rudo rwenyu. Rudo urwu harunzwisisiki nepfungwa dzemunhu. Haruna chitema. Uye runogara nekusingaperi. Midzi yangu yakadzika murudo rwenyu. Nyika inovona rudo urwu pandiri. Muzita raJesu. Ameni.